မွနျမာ့ လကွေောငျးကို ဗုံးဖောကျခှဲမယျလို့ ခွိမျးခွောကျခံရ — မွနျမာဌာန
မွနျမာ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လကွေောငျးလိုငျး MAI မှ လယောဉျတဈစီး ရပျနားနပေုံ ဖွဈပါသညျ။
MAI အနနေဲ့ ခရီးသှား ပွညျသူတှေ လုံခွုံရေးအတှကျ သကျဆိုငျရာတှကေို သတိပေး အကွောငျးကွား ထားတယျလို့ ပွောပမေယျ့ ခွိမျးခွောကျစာမှာ ပါတဲ့အကွောငျးအရာ အသေးစိတျကိုတော့ ထုတျဖျော ပွောဆိုသှားခွငျး မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ခွိမျးခွောကျစာထဲမှာ "Son of Allah" အလ်လာရဲ့သားလို့အမညျပေးထားတဲ့ အဖှဲ့တဈခုက ပေးပို့တဲ့စာ ဖွဈတယျလို့ သတငျးရရှိပါတယျ။
ရနျကုနျမွို့မှာရှိတဲ့ နိုငျငံတကာ သံရုံးတှနေဲ့ ကုလသမဂ်ဂ အဖှဲ့အစညျးတှကေတော့ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး သကျဆိုငျရာ ဝနျထမျးတှကေို သတိပေး အကွောငျးကွား ထားပါတယျ။
SON OF ALLAH လို့ဖော်ပြခြင်းဟာ. ချောက်တွန်းမှုဖြစ်နိုင်သလို. အဲလိုချောက်တွန်းမှုလို့ထင်အောင် တမင်ရေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. တကယ်လို့ မူဆလင်တွေအမှန်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဒီပြသာနာဟာတစ်မျိုးသားလုံးပါဝင် ပတ်သက်လာလိမ့်မယ်.
မြန်မာတွေဟာ လူသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ လူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုတွေကို အပြင်းထန်လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ဒီပြသာနာမျိုးဖြစ်လာရင်တော့ ဘယ်သူမှ ငြိမ်ခံနေမှာမဟုတ်ပါဘူး.တကယ်ဖြစ်မလာရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ.
အဲ့ဒါကုလားတွေကိုချောက်တွန်းချင်လို့ son of allah လို့ေ၇းတာပါ သိသာလွန်းတယ်လိမ်တာကလည်း၊ဘယ်မူဆလင်ကမှallah ၇ဲ့ သားလို့ မပြောဘူး ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ allah မှာသားတို့ သမီးတို့ မရှိဘူး အရူးတွေ၇ဲ့ လိမ်တာလည်းယုတ္တိ ရှိအောင်လိမ်၇တယ်မှတ်၊၊